के तपाईंको चिकन एस ** टी कम्पनी अझै विफलता अँगाल्छ? | Martech Zone
शनिबार, जून १,, २०१। बिहीबार, जुन 18, 2015 Douglas Karr
आज राती एक रमाइलो रात थियो। केही साथीहरू र म हेर्न गए एरिक डेभिस आफ्नो एक मानिस प्रदर्शन, रेड हरामी, मा इन्डी फ्रिंज थिएटर शो अचम्मको छ, दर्शकहरूलाई मोहित गर्दछ र त्यसपछि एकै पटकमा प्रत्येक दर्शक सदस्यलाई बिस्तारै नष्ट गर्दछ।
शोको एक भागको दौरान, दर्शकहरूका सदस्यहरूलाई उनीहरूको सपना के हो भनेर सोधिन्छ ... उनीहरूले के गर्छन् भन्ने बारे प्रश्नहरू पछि। रेड ब्यास्ट्रार्डले त्यसपछि व्यक्तिलाई उनीहरूबाट टाढा हिड्नको लागि कदमहरू चालेको छ do र उनीहरूको दिशामा चरण बनाउनुहोस् सपना। केहिले यो गरेझैं, दर्शकहरु चिच्याए, "हरामी"। जब अरूहरू आक्रोशित हुन्छन् र कदम बेवास्ता गर्छन्, तिनीहरू दर्शकहरूले औंल्याइएका हुन्छन् र "चिकन एस ** टी" भनिन्छ। परिणाम आश्चर्यजनक को छोटो छैन। दर्शकहरुमा सबै रेड ब्यास्टर्डको अर्को फोकसको अन्त्यमा हुने डर छ।
यसको मार्केटिंगसँग के गर्नुपर्दछ? तपाईले सोचे भन्दा बढी।
यो एक विशिष्ट, सामान्य, धेरै प्रतिस्पर्धी कीवर्डको स्क्रीनशट हो गुगल इन्साइट्स:
मैले गत हप्ता एउटा कम्पनीसँग भेटें जसको मुख्य सेवा यो हो विशिष्ट कुञ्जी शब्द। कम्पनीले प्रारम्भदेखि नै परम्परागत मिडियामा एक भाग्य ($०k भन्दा बढीको एक विशिष्ट अभियानमा) खर्च गरिरहेको छ। ती अभियानहरूको लागत समय बृद्धि गर्न जारी छ र परिणाम घट्दै गएको छ। अब तिनीहरू अनलाइन मार्केटिंगमा हेर्दैछन् कि हेरौं यदि तिनीहरूले हेमोरेजिंग रोक्न सक्दछन्।
जब म बोर्डरूममा बसें, त्यहाँ अनलाईन मैदानमा उफ्रने कोठामा डर मात्र थिएन, त्यहाँ अविश्वास र अविश्वास थियो। यो कम्पनी केवल अस्वीकार मा थिएन, तिनीहरू वास्तवमा असफलता अँगालेको थियो। टेबलमा ती जो अगाडि बढ्न दबाब दिइरहेका छन् (मलाई समावेश गर्दै) यथार्थत "बस्टर्ड्स" को रूपमा हेरिए। जे होस् कम्पनी पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्दछ कि उनीहरूले के गरिरहेका छन् त्यसले काम गरिरहेको छैन, तिनीहरू विकल्पको रूपमा अनलाइन सार्नको विरुद्ध बहस गर्न जारी राख्छन्।
यसले मलाई अखबारको उद्योगमा भएको सम्झना गरायो। मैले हेर्दा विज्ञापन उद्योगका सब भन्दा बौद्धिक नेताहरूले eBay र Craigslist स्काइरोकेट हेरे र त्यसोभए उनीहरूको टाउको कोरे जुन अचम्म मा छ कि वर्गीकृत राजस्व किन खस्कँदैछ भनेर।
म कम्पनीहरूलाई पूर्ण रूपमा डरबाट अभिनय गर्ने र सतर्क भई नयाँ प्रविधि अँगाल्ने मान्यता दिन्छु, तर सर्च र सोशल मिडियाको उपभोक्ताहरूको प्रचलनको रूपमा प्राथमिक विधिहरू तिनीहरूको अर्को खरीद अनुसन्धान को… तपाईं कसरी स्पष्ट प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई कम्पनीहरूले डर अँगालेकोमा आपत्ति छैन - तर जब म कम्पनीहरूले विफलता अँगालेको छु तब म चकित भएँ।
यदि हामीले यस कम्पनीलाई अगाडि बढाउने अवसर गुमायौं भने, म खडा हुन सक्छु र तिनीहरूलाई वास्तवमा के हो बताउन प्रलोभनमा पर्न सक्छ ... "चिकन एस ** टी!" रेड हरामी गर्व हुन्छ… वा होईन।
नोट: मेरो माफी माग्नुहोस् यदि तपाईं स्पष्ट तारामा नाराज हुनुहुन्छ ... यो उत्तमको लागि हो। म परम्परागत मिडियाको पनि विरोध गर्दिन - तर अनलाईन व्यवहारमा कसरी प्रवृत्तिले ग्राहकको निर्णय-निर्णयलाई बदल्दै छ भन्ने कुरा बुझ्नु तपाईंको मिडिया व्ययहरू समायोजित गर्न महत्वपूर्ण छ। यस अवस्थामा, यो स्पष्ट छ कि अनलाइन समाधानहरूमा उपभोक्ताहरूको रुचि नाटकीय रूपमा बढेको छ।
टैग: विफलताइन्डी फ्रिंजरातो हरामी
त्यो पहिलो चरण सधैं गाह्रो हुन्छ। ज्ञातबाट टाढा जान यो अत्यन्तै गाह्रो छ। धेरै व्यक्तिहरू आफ्नै निश्चितताले साघुँरो हुन्छन्। आशा छ कि कम्पनी को सन्दर्भ को लागी उनि लीप लिने निर्णय गर्छन्। उत्कृष्ट लेख।